Shirkii Golaha Wasiiradda ee Kismaayo oo lagu Ansixiyay Sharciyo. – Hornafrik Media Network
Shirkii Golaha Wasiiradda ee Kismaayo oo lagu Ansixiyay Sharciyo.
By HornAfrik	 Last updated Jul 13, 2017
Shirka Golaha Wasiirada Xukuumadda Soomaaliya ayaa goor dhow lagu soo gaba gabeeyay magaalada Kismaayo, iyadoo lagu ansixiyay sharciyo dhowr ah.
Shirkan oo ahaa midka todobaadlaha ah ayaa ah kii u horeeyay ee ka dhaca meel ka baxsan magaalada Muqdisho, tan iyo markii dowladdu ay ka baxday kumeel gaarka.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa shir guddoominayay kulanka, iyadoo uu dhinac fadhiyay Ra’iisul Wasaare kuxigeenka.
Golaha Wasiirada ayaa shirka ku ansixiyay sharciga Saxaafada oo dhowaan Wasiirka Warfaafinta ku dhawaaqay in dib u eegis lagu sameeyay qodobadii ay cabashada ka keeneen saxaafada.
Sidoo kale Waxaa shirka lagu ansixiyay sharciga Waxbarashada oo uu soo diyaariyay Wasiirada Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta.
Waxaa kaloo shirka lagu ansixiyay xuquuqda uu yeelanayo Madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo markii u horeysay dowladda Soomaaliya ay xuquuq gaar ah u sameyn doonto madaxda dalka soo maray.
Wasiir Eng. Yarisow ayaa yiri “Sababaha keenay in wax-ka bedel loogu sameeyo Xeerkan Saxaafada ayaa aheyd cabashooyin ka yimid suxufiyiinta Soomaaliyeed oo qodobo ka mid ah u baahdeen in wax laga bedelo sida qodobka 35aad oo sheegayey in suxufigu uu heystaa shahaado jaamicadeed ee suxufinimo. Sidaad daraadeed ayaan qodobkan wax uga bedelnay iyo sidoo kale qodobo kale oo ka mid ahaa Xeerkan.”
Wasaarada Warfaafinta, Dhaqanka & Dalxiiska ee Dowladda Federaalka ayaa wadatashiyo ballaaran la yeelatay Wasaaradaha Warfaafinta Dowlad-Goboleedyada, iyo Qaar ka mida Ururadda Saxaafadda. iyadoona la badalay Qodobadda Qaar.
Xeerkan Saxaafada oo ay Golaha Wasiiradu ansixiyeen maanta oo loo gudbin doonaa Golaha Shacabka si ay waajibaadkooda dastuuriga ah uga gutaan ayaa waxaa ka soo horjeeda Ururka Suxufiyiinta Qaranka Soomaaliyeed ee NUSOJ, iyadoona Xoghayaha Guud ee Ururka uu ku tilmaamay Sharcigan mid lagu cabiranayo Saxaafadda
Al-shabaab oo duleedka degmada Xudur ku dilay Ciidamo ka tirsan Dowlada.